Ny tambajotra sosialy miverina amin'ny fampiasam-bola tsy refesinao | Martech Zone
Ny tambajotra sosialy miverina amin'ny fampiasam-bola tsy refesinao
Talata, Aogositra 26, 2014 Talata, Aogositra 26, 2014 Douglas Karr
Lazaina ny marina, maro amin'ireo orinasa niara-niasa tamiko no nanana olana tamin'ny fanarahana sy fandrefesana fiverenana amin'ny fampiasam-bola raha resaka media sosialy no resahina. Misy fomba roa fototra hamoronana lanja amin'ny ezaky ny haino aman-jery sosialy an'ny fikambanana misy anao:
Inona no mety ho vidin'ny fivezivezena amin'ny orinasanao amin'ny Pay Per Click? - Satria navoaka ny teny fanalahidy sy ny vidin'ny karama isaky ny tsindry, dia azonao atao ny mampifanaraka ny teny lakileo ao Analytics amin'ny vidin'ny karama isan-tsindry ho an'ireo teny mitovy. Ampio ny isa ary mazàna ianao manana tantara mahafinaritra be dia be milaza amin'ny fikambananao hoe ohatrinona ny vola nitahirizanao ny orinasa.
Ohatrinona ny haben'ny varotra azonao ampitaina mivantana amin'ny haino aman-jery sosialy? - Ny fanarahana ny varotra mivantana avy amin'ny loharanom-baovao sosialy dia fomba azo antoka hanaporofoana ny fiverenan'ny fampiasam-bola. Tafiditra ao anatin'izany, mazava ho azy, ny motera fikarohana - izay mazàna hitarika fivezivezena marobe mankany amin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Mpandraharaha haino aman-jery an-tserasera maro no tsy mahita lavitra. Ny fiantraikan'ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola dia mihoatra lavitra an'ireo tsindry mivantana ireo. Iray amin'ny David Armano's ny kisary tamin'ny taona lasa dia iray izay tohizako hatrany:
The tamberim-bidy fanampiny Tsy dia tsotra refesina nefa misy. Ny fandefasako hafatra amin'ny mpanjifa dia vitantsika izany nanomboka amin'ny fandrefesana ny tamberim-bola amin'ny fomba roa voalohany - fa mbola hisy fomba maro hafa hahitan'ny orinasanao ny fiverenany amin'ny fampiasam-bolany amin'ny media sosialy:
Tonga mpitarika eritreritra ao amin'ny indostriao - raha tsy mieritreritra ianao fa ny varotra dia mety ho avy amin'ny famoahana ny anaranao amin'ny sehatry ny indostria fotsiny dia diso ianao. Ny lakilen'ny media sosialy dia ny fampidirana zana-dehilahy amin'ny marika iray satria mampiorina fahatokisana izany. Ny fitokisana dia lakilen'ny fahombiazan'ny orinasa. Raha vantany vao manomboka mandray anjara amin'ny haino aman-jery sosialy mavitrika ianao dia matetika no asaina hiteny amin'ny fivoriambe ataon'ny orinasa sy ny mpiara-miombon'antoka, hetsika, tranonkala web sns
Fananganana fifandraisana manokana amin'ny mpanjifanao - sarotra ny mamela ny olona itiavantsika azy. Indraindray ny olona no lakaoly ilainao amin'ny fifandraisan'ny orinasa hitazonana ny mpanjifa. Tsy ny zava-misy sy tarehimarika rehetra, matetika fa kely kokoa noho ny an'ny olona. Ny mpiasa no mahatonga ny fahasamihafana ary ny haino aman-jery sosialy mamela anao hahita ao ambadiky ny marika sy hifandray manokana amin'ny olona ao amin'ny orinasa.
Marketing amin'ny Word of Mouth - dia voaporofo fa iray amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny marketing amin'ny orinasa, fa tsy zavatra azo foronina amin'ny fomba artifisialy (manandrana ny maro). Amin'ny resadresaka amin'ny haino aman-jery sosialy, dia manome soso-kevitra ireo orinasa, vokatra ary serivisy isaky ny afaka aho. Matetika izany no fihetsika amin'ny tambajotra - mangataha fanampiana na mampiroborobo serivisy ary manaparitaka ny vaovao ny olona!
Fananganana laza - Ny laza no zava-drehetra amin'ny Internet, ary miteraka laza lehibe eo amin'ny tranokalanao, amin'ny tamba-jotra sosialy, ary amin'ny tranokalan'ny mpanjifanao sy ny tambajotra sosialy no fototry ny fahatokisana izay hiteraka orinasa. Ny fifampitokisana no zava-dehibe indrindra amin'ny raharaham-barotra rehetra, ary mora kokoa ny mandresy ny olana atokisana amin'ny alàlan'ny fifandraisana manokana amin'ireo olona ao ambadiky ny marika.
Fahefana manorina - miaraka amin'ny fananganana laza, ianao koa dia manangana tantara miaraka amin'ny motera fikarohana izay refesina na amin'ny citation na backlinks. Io laza mitohy io, mifandraika amin'ny lohahevitra sy teny lakile manokana, dia hitohy hampandeha ny atiny zarainao sy ireo tranonkala soratanao eo an-tampon'ny valin'ny motera fikarohana. Ny fikarohana dia loharanom-bola amin'ny Internet. Aza mety hofitahina - ny fahombiazan'ny haino aman-jery sosialy dia manasongadina izany fahefana anorenanao amin'ny motera fikarohana izany.
Varotra ankolaka - Betsaka ny olona manao fikarohana momba ny tranonkala no hamaky, hiala, hamaky, hiala, hamaky, hiala, avy eo miverina manao zavatra. Raha vita amin'ny bilaogy ny famakiana fa ny fiovam-po dia mitranga amin'ny tranokala ecommerce na tranokala orinasa misy anao, indraindray tsy afaka atao amin'ny tranokala Analytics hanomezana tombana ny fitsidihana mivantana ny media sosialy. Ny zava-misy dia mitoetra fa maro amintsika no nifandray tamin'ny alàlan'ny media sosialy saingy nanao asa aman-draharaha tamiko mivantana ianao nefa tsy nanonona ny bilaogiko… saingy teo izy io ary nisy vokany.
Mitsitsy vola amin'ny serivisy - Rehefa mamaky ny bilaoginao ny mpanjifanao dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny isan'ny serivisy sy ny fitantanana ny kaonty amin'ny fampianarana azy ireo amin'ny Internet. Matetika ny media sosialy dia mpanelanelana amin'ny olona iray. Raha tokony manoratra mailaka ho valin'ny mpanjifa ianao dia afaka nanoratra an-tserasera ary namoaka izany ho an'ny besinimaro. Sarotra ny refesina ny asa tsy tokony nataonao - fa eo izy!
Atiny sy hafatra - isan'andro mandray anjara amin'ny haino aman-jery sosialy ny orinasanao dia andro ianaran'ny mpiasanao, fanazarana ny famolavolana ny hafatrao, sy ny fampahafantarana azy. Arakaraka ny I miresaka, mifampidinika, ary manaova bilaogy momba ny media sosialy ary ny fiatraikany amin'ny orinasa, mora kokoa amiko ny manampy ny prospect vaovao sy ny mpanjifa hahatakatra ny fomba fampiasana azy io. Mandray anjara amin'ny resadresaka aho, mamaky izay lazain'ny manampahaizana hafa, mahita izay tafita sy tsy nahomby ary afaka mampihatra izany amin'ireo mpanjifako. Misy sanda tsy mampino amin'ity, saingy sarotra ny refesina ny ROI.
Mampiroborobo ny fampiasam-bolao amin'ny haino aman-jery sosialy
Ny fahafaha-mikendry manokana sy ny vidiny ambany isaky ny tsindry eo amin'ny doka media sosialy dia manao azy ho fampiroboroboana tokana izay tokony hararaotinao tanteraka. Raha mandany fotoana amin'ny fananganana mpijery media sosialy na vondrom-piarahamonina ianao, maninona no tsy hataonao avo roa heny ny fampiasam-bolanao ary ho azonao antoka fa mahatratra olona maro ao anatin'ny tambajotra misy ifandraisany tokoa izany? Tsy lazaina intsony ny zava-misy fa ny Facebook sy ireo sehatra hafa dia manome toerana tsara lavitra kokoa amin'ny fampiroboroboana karama noho ny organika!
Tsy REHETRA na TSY MISY.
Ny manam-pahaizana sasany ao amin'ny media sosialy dia tsy miaiky ny lanjan'ireo media sosialy sy tranokala tambajotra hafa toy ny Twitter, LinkedIn, Facebook, sns. Mino izy ireo fa tokony handany ny fotoananao amin'ny zavatra iray ianao or ny hafa. Tian'izy ireo ny mampitaha ireo sehatra sy paikady hanondroana ny paikadin'izy ireo ho toy ny iray monja mandany rehetra ny loharanonao ary tokony ho laninao na inona na inona amin'ny hafa.
Ny hitako tamin'ny haino aman-jery sosialy dia ny fampiasana mahomby isaky ny fampitaovana mba hampiroboroboana ny tanjany sy hialana amin'ireo fahalemeny Ny Twitter dia fitaovana iray lehibe hahatratrarana olona marobe amin'ny ezaka kely…. saingy tsy fampitaovana mahomby ho an'ny lohahevitra (toa ity lahatsoratra ity) izay mila fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny lohahevitra iray. Ny bilaogiko dia fampitaovana tonga lafatra amin'ny fanazavana amin'ny antsipiriany. Ka - afaka minitra vitsy dia hisy bitsika halefa, avy amin'ny Hootsuite amin'ireo 80,000 XNUMX mahery amin'ireo mpanaraka ahy manokana sy matihanina… mitarika mpitsidika maro hiverina amin'ny bilaogiko, ny sasany hizara ny lahatsoratra, ary mety tsara ny fiverenan'ny fampiasam-bola.
Tags: fanamarihana ny media sosialyserivisy ho an'ny mpanjifa media sosialyfiverenan'ny media sosialy amin'ny fampiasam-bolahaino aman-jery sosialy roivarotra amin'ny media sosialyvidin'ny fifamoivoizana amin'ny media sosialy
Moa ve manaraka ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny etika ny haino aman-jery sosialy?
Manatsara ny fandanianao Webinar: Webinar ROI Calculator
7 Jiona 2009 à 9:43
Hevitra tsara momba ny ROI mivantana sy ankolaka amin'ny media sosialy.
Ny haino aman-jery sosialy dia fifangaroan'ny fitsipi-pifehezana manomboka amin'ny Branding mankany PR mankany amin'ny Marketing. Ny marika sy ny PR dia momba ny ROI ankolaka raha ny Marketing dia momba ny ROI mivantana.
Saingy rehefa atambatra amin'ny endrika tokana toy ny media sosialy ireo fiasa rehetra ireo, dia mila mamaritra aloha ny fampiasan'izy ireo ny media sosialy ny orinasa, alohan'ny hanapahana hevitra hoe inona no karazana ROI ilaina.